Onye na -eti ọkpọ Evan Holyfiled: Onye Mmekọ Ọhụrụ na -arụpụta uru nke CBD
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Onye na -eti ọkpọ Evan Holyfiled: Onye Mmekọ Ọhụrụ na -arụpụta uru nke CBD
Evan Holyfield nke ama ama ama na-agba mbọ ime ka mmata maka ahụike na ahụike nke CBD na ụlọ ọrụ obodo.
Ụlọ ọrụ Georgia Hemp kwupụtara mmekorita ya na onye ọkpọ ọkpọ ọkpọ, Evan "Yung Holy" Holyfield, na-akpọ ya ụdị ndụ kachasị ọhụrụ na onye mmekọ ahụike maka ụlọ ọrụ ahụ. Mmekọrịta a na Holyfield na-abịa n'oge dị mkpa n'ọrụ ya ka ọ na-akwado maka ọgụ na-esote na Ọktoba 23 na-atụ anya imeziwanye usoro ịkụ ọkpọ ọkachamara na-enweghị mmeri na 8-0.
"Ụlọ ọrụ Georgia Hemp nwere obi ụtọ iso Holyfield na ndị otu ya na-arụkọ ọrụ iji kwalite ma nchụso anyị kachasị mma," Joe Salome, Onye Mmekọ nke Ụlọ Ọrụ Georgia Hemp kwuru. "TGHC na otu Holyfield na-egosi na ha bụ egwuregwu zuru oke na ụwa ịzụ ahịa egwuregwu nke oge a yana ihe atụ dị ịrịba ama nke ndị na-eme egwuregwu ọgbara ọhụrụ nke oge a na-emekọrịta ihe na akara ngwaahịa a na-ahụ anya na mmetụta. Ndị a bụ njikọ aka na-atọ ntọala maka mmekọ egwuregwu n'ọdịnihu. Ọktoba 23 bụ mmalite."
Nwa nke onye ọkpọ ọkpọ, Evander Holyfield, Evan enweela mmasị dị ukwuu na oghere CBD na-eto eto ma na-anwale ụzọ mgbake nke nwere ike inyere ya na ndị egwuregwu ndị ọzọ gburugburu ụwa aka. Na mmekorita ọhụrụ ahụ, Holyfield kwuru, “Obi dị m ụtọ na mụ na The Georgia Hemp Company na-arụkọ ọrụ. Ọ bụghị nanị na ha na obodo m n'obodo Atlanta, ma dị ka onye na-eme egwuregwu, ọ bụ incredibly mkpa ka m na m na-eji ngwaahịa ndị bụ eke na ga-enyere aka-m ọrụ na-esonụ larịị. Enwere m olileanya na mmekorita anyị ga-akwalite uru ahụike nke CBD - ọ bụghị naanị maka ndị na-eme egwuregwu, mana onye ọ bụla - yana otu ọ ga-esi nyere usoro mgbake na ahụike zuru oke. "
"Mmekọrịta a na-enyere aka mee ka uche gaa n'ihe CBD nwere ike ime maka ahụ ma na-edozi ahụ ike site na nkwadebe na mgbochi," Ryan Dills, Onye Mmekọ nke Ụlọ Ọrụ Georgia Hemp kọwara. "Anyị na -atụ anya iweta ụfọdụ nhazi na mgbake na mgbazigharị nke dị mkpa na egwuregwu mmetụta/ọgụ dị elu."